Apokalypsy 3:1-6 "1 Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fiton’Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona hianao, kanjo maty ihany. 2 Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan’Andriamanitro. 3 Dia tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina hianao, dia ho tonga toy ny fihavin’ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao. 4 Kanefa misy olona vitsy atỳ aminao atỳ Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany; ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika Izy. 5 Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin’ny bokin’ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny Raiko sy eo anatrehan’ny anjeliny. 6 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana."
Mody velona. Fiangonana jerena mavitrika amin’ny asa ny Fiangonana ao Sardisy kanefa dia «maty» hoy Ny Tompo!(1). Toa masiaka erỳ izato filazany azy! Rehefa dinihana tokoa dia tsy voatery izay hita aty ivelany no mamaritra ny fiainam-panahin’ny Fiangonana iray. Mety ho misy tena hita taratra ihany saingy misy koa ny fisehosehoana fotsiny! Andriamanitra no mahita ny miafina sy ny marina izay mety tsy ho hitan’ny olona (1) ary tsy voafitaka velively amin’izany Izy! Aiza ho aiza amin’izany ny fiangonana misy antsika ankehitriny? Tena tafaray marina amin’Andriamanitra sa mody velona? Hatsangana amin’ny maty. Raha ara-tsiantifika, ny hoe «maty» dia tsy misy azo antenaina intsony ny aminy.Ao amin’i Kristy kosa, ny olona rehetra izay mbola tsy nibebaka sy niaiky ny maha-mpanota azy na koa efa nandray Ny Tompo fa tsy miaina araka ny sitrapony (2) no lazaina ho maty.Mbola azon’Andriamanitra atao ny mamelona izay rehetra tafasaraka aminy saingy safidin’ny tsirairay ny hanaiky na handà izany (Romana 3:22-26). Voavonjy mandrakizay. Karazan’olona 3 no misy eo anivon’ity fiangonana ity: Ao ireo mandeha miangona fotsiny saingy mbola maty ara-panahy (1), ao ireo efa nandray ny famonjena saingy varimbariana ka lasa matory ara-panahy ary mila tairina hiala amin’ny fanao ratsy taloha (2), fa ao indrindra koa ireo izay tena mitombo amin’ny fanarahana an’Andriamanitra (4). Fampanantenana mahafinaritra no hamaranan’Ny Tompo ny hafatra ho an’ny Fiangonan’i Sardisy ary ho antsika koa: azo antoka fa voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana ny anaran’ireo izay efa tena kristiana (5).
Diniho ary zarao amin’ny hafa: Ahoana ny hahazoanao antoka fa efa an’i Kristy ianao? Ampahafantaro ireo izay tsy mahalala izany!